Lasa fantatrao kokoa Andriamanitra rehefa namaky an’ity gazety ity ianao, sa tsy izany? Hainao, ohatra, hoe Jehovah no anarany ary ny fitiavana no toetra mampiavaka azy. Hitanao koa hoe inona no efa nataony ho an’ny olombelona, ary inona no mbola hataony. Mbola be dia be aza ny zavatra azonao ianarana momba an’Andriamanitra. Inona ny soa horaisinao raha mianatra momba azy ianao?
Mampanantena i Jehovah hoe “raha mitady azy ianao, dia hataony izay hahitanao azy.” (1 Tantara 28:9) Eritrereto ange izany e! ‘Hifandray akaiky amin’i Jehovah’ ianao, raha mitady azy ka lasa mahafantatra tsara azy. (Salamo 25:14) Inona no vokany rehefa lasa akaiky azy ianao?
Ho faly sy ho sambatra ianao. Milaza ny Baiboly hoe “Andriamanitra falifaly” i Jehovah. (1 Timoty 1:11) Ho falifaly koa ianao raha lasa akaiky azy sady miezaka hanahaka azy. Tsy ho mora kivy ianao amin’izay, hilamin-tsaina, ary ho salama kokoa. (Salamo 33:12) Ho sambatra koa ianao, satria hifandray tsara amin’ny hafa, hanana fahazarana tsara, ary hiala amin’izay mety hanimba ny fiainanao. Hiaiky ianao amin’izay hoe: “Ny manakaiky an’Andriamanitra no tsara amiko.”—Salamo 73:28.
Ho tiany ianao sady hokarakarainy. Nampanantena i Jehovah hoe: “Hanoro hevitra anao aho ary hitsinjo anao ny masoko.” (Salamo 32:8) Midika izany hoe mandinika ny mpanompony tsirairay izy ary manome izay ilainy. (Salamo 139:1, 2) Raha mifandray akaiky amin’i Jehovah ianao, dia ho hitanao hoe tsy handao anao mihitsy izy.
Ho tsara be ny hoavinao. Ampian’i Jehovah ianao mba ho sambatra, ary tsy amin’izao ihany fa amin’ny hoavy koa. (Isaia 48:17, 18) Hoy ny Baiboly: “Mba hahazoan’izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy ny mianatra hahalala anao, ilay hany tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao.” (Jaona 17:3) Ary na sarotra aza ny fiainana amin’izao, dia manampy antsika ho “mafy orina” ny fanantenana.—Hebreo 6:19.
Tsy mandrisika anao hianatra bebe kokoa momba an’Andriamanitra sy hifandray akaiky aminy ve ireo? Vao santionany fotsiny anefa ireo. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia miresaha amin’ny Vavolombelon’i Jehovah na midira ao amin’ny jw.org/mg.
Hizara Hizara Inona ny Soa Horaisinao Raha Fantatrao Tsara Izy?